HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
VOARARA an-taonany maro ny fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Rosia. Faly be anefa izy ireo tamin’ny 1991 fa nekena ho ara-dalàna ihany izany. Tsy nisy nanampo mihitsy tamin’izay hoe hitombo avo folo heny izy ireo, ka ho lasa 170 000 eo ho eo izao! Misy avy any an-tany hafa ireo mpitory mazoto ireo. Hanampy amin’ilay asa fijinjana ara-panahy any Rosia no nahatongavany. (Mat. 9:37, 38) Andao hiresaka kely momba azy ireo.
RAHALAHY VONONA HANAMPY FIANGONANA
Avy any Grande-Bretagne i Matthew, ary 28 taona izy tamin’ny 1991. Noresahina tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra tamin’izay fa tsy ampy mpitory any Eoropa Atsinanana. Nilaza, ohatra, ilay mpandahateny fa tsy misy anti-panahy ao amin’ny fiangonana iray any Saint-Pétersbourg, Rosia, sady iray monja ny mpanampy amin’ny fanompoana. Manana mpianatra an-jatony anefa ny mpitory. Hoy i Matthew: “Lasa masaka tao an-tsaiko ilay hanompo atỳ Rosia, dia noresahiko tamin’i Jehovah hoe te hifindra atỳ aho.” Nanangom-bola àry izy. Namidiny koa ny ankamaroan’ny fananany, dia nifindra tany Rosia izy tamin’ny 1992. Nanao ahoana ny fanompoany?
Hoy i Matthew: “Sarotra tamiko ny teny rosianina. tena afaka nifampahery tamin’ny mpiara-manompo aho tamin’izany.” Nanahirana azy koa ny nitady trano. Hoy ihany izy: “Tsy maintsy nifindrafindra trano aho sady tampoka be foana. Imbetsaka loatra ilay izy, ka tsy tadidiko intsony hoe impiry!” Nilaza anefa izy hoe: “Ny nifindra teto Rosia no fanapahan-kevitra tsara indrindra nataoko. Lasa natoky kokoa an’i Jehovah aho sady nahatsapa hoe nitari-dalana ahy foana izy.” Lasa anti-panahy sy mpisava lalana manokana i Matthew tatỳ aoriana, ary manompo ao amin’ny Betela any akaikin’i Saint-Pétersbourg izy izao.
Avy any Japon i Hiroo. Nanao Sekoly Fampiofanana ho Amin’ny Fanompoana izy tamin’ny 1999, tamin’izy 25 taona. Nampirisika azy hanompo any an-tany hafa ny mpampianatra azy. Efa henon’i Hiroo hoe mila mpitory maro ny any Rosia ka nianatra teny rosianina izy. Tsy izay ihany anefa no nataony. Hoy izy: “Nankatỳ Rosia nandritra ny enim-bolana aho. Novambra aho no nandeha, mba hahitako raha ho zakako ny ririnina atỳ. Mangatsiaka be mantsy atỳ.” Zakany tsara ilay izy, ka nody izy aloha mba hanangom-bola. Notsoriny ny fiainany satria te hipetraka tany Rosia izy.
Hiroo sy Svetlana
Efa 12 taona izao i Hiroo no tany Rosia, ary efa maromaro ny fiangonana nampiany. Izy irery indraindray no anti-panahy nefa mpitory 100 mahery no niandraiketany. Nisy fotoana aza izy isan-kerinandro nitarika ny ankamaroan’ny anjara tamin’ny Fivoriana Momba ny Fanompoana, nitarika ny Sekolin’ny Fanompoana sy ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana, ary nitarika Fianarana Boky dimy samy hafa. Izy irery koa matetika no nanao fitsidihan’ny mpiandry. Hoy izy: “Faly be aho hoe afaka nanampy ny mpitory mba hatanjaka ara-panahy.” Nahasoa an’i Hiroo ve ny nifindra tany Rosia? Hoy izy: “Efa anti-panahy aho sady mpisava lalana, tamin’izaho tany aminay. Hafa mihitsy anefa ny fifandraisako tamin’i Jehovah rehefa tonga tatỳ aho. Lasa niantehitra kokoa taminy aho tamin’ny zava-drehetra.” Nanambady an’i Svetlana i Hiroo tamin’ny 2005, ary mbola mpisava lalana izy roa.
I Michael sy Olga miaraka amin’i Marina sy Matthew
Avy any Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michael rahalahiny, izay 28 taona. Niara-nitsidika an’i Rosia izy ireo, ary gaga fa betsaka ny olona liana tonga nivory nefa vitsy kely ny rahalahy afaka nitarika fivoriana. Hoy i Matthew: “Nisy 200 ny mpanatrika tao amin’ny fiangonana iray nalehako, nefa anti-panahy iray efa be taona sy mpanampy amin’ny fanompoana mbola tanora kely no nitarika ny fivoriana rehetra. Nalahelo azy ireo aho, dia te hifindra tatỳ.” Nifindra tokoa izy tamin’ny 2002.
Nanaraka azy koa i Michael, efa-taona taorian’izay, ary tonga dia nahita fa mbola tsy ampy rahalahy tany Rosia. Mpanampy amin’ny fanompoana izy, ka izy daholo no nasaina nikarakara ny kaonty sy ny boky ary ny faritany. Nasaina nanao ny asan’ny mpitan-tsoratra mihitsy aza izy. Nanao lahateny koa izy, ary nanampy rehefa nisy fivoriambe sy rehefa nisy Efitrano Fanjakana naorina. Mbola mila rahalahy be dia be any hatramin’izao. Anti-panahy izao i Michael, ary mbola be andraikitra foana. Hoy anefa izy: “Tena tiako ny manampy ny mpiara-manompo. Izany no mahafinaritra ahy indrindra!”
Nanambady an’i Marina i Matthew, ary i Michael kosa nanambady an’i Olga. Mitombo be ny fiangonana any Rosia, ary mbola mazoto manompo any izao izy efatra sy ny mpitory maro hafa.
MANAO IZAY HO AFANY KOA NY ANABAVY
Avy any Ukraine i Tatyana. Nisy mpisava lalana manokana enina avy any Polonina sy Slovakia ary avy any amin’ny Repoblika Tseky voatendry hanompo tao amin’ny fiangonany, tamin’izy 16 taona, tamin’ny 1994. Hoy i Tatyana: “Nazoto nanompo izy ireo sady tsara fanahy sy mora iresahana. Nahay Baiboly be koa ry zareo.” Hitan’i Tatyana hoe notahin’i Jehovah izy ireo satria nahafoy tena, ka nieritreritra izy hoe: ‘Tiako koa aho izao raha mba hoatran-dry zareo.’
Nanome modely tsara ho an’i Tatyana ireo mpisava lalana ireo. Nitory tany amin’ny faritra mbola tsy nitoriana tany Ukraine sy Bélarus àry izy sy ny mpitory maromaro rehefa vakansy. Tiany be ilay izy ka tapa-kevitra izy fa hanitatra faritany any Rosia. Nankany kely aloha izy mba hitsidika anabavy iray tonga tany talohany. Nitady asa mety amin’ny mpisava lalana koa izy tany, ary nifindra tamin’ny taona 2000. Mora taminy ve izany?
Hoy i Tatyana: “Nanofa efitra kely iray tany an-tranon’olona aho satria izay no mba takatry ny volako. Mafy tamiko ilay izy. Nisy fotoana aza aho te hody. Nataon’i Jehovah foana anefa izay hahitako fa tsy hanenina aho raha mijanona.” Misionera any izao i Tatyana. Hoy izy: “Nahaizako zavatra be dia be ny fotoana ela nijanonako tatỳ, sady lasa nahazo namana maro aho. Nihanatanjaka koa ny finoako, ary izany no tena mahafaly ahy.”
Avy any Japon i Masako, ary 50 taona mahery kely. Efa te ho misionera foana izy saingy tsy salama ka tsy nety tanteraka ny nofinofiny. Vao nihatsara kely anefa ny fahasalamany, dia nifindra tany Rosia izy mba hanampy amin’ny asa fijinjana. Sarotra taminy ny nahita trano mety tsara sy asa mitohy. Nampianatra teny japoney sy nikarama nanadio trano anefa izy, ka nahavita ny asan’ny mpisava lalana foana. Nahoana izy izao no mbola mazoto?
Efa 14 taona mahery i Masako no tany Rosia. Hoy izy: “Tena mahafinaritra ahy ny fanompoana ka hadinodinoko ny olana mahazo ahy. Lasa mavitribitrika sy falifaly ianao rehefa mitory any amin’ny toerana mbola tena mila mpitory.” Hoy koa izy: “Nataon’i Jehovah foana izay hahitako sakafo sy akanjo ary trano. Tena fahagagana ilay izy amiko.” Efa nanitatra faritany tany Kirghizistan koa i Masako, sady nanampy antoko-mpitory miteny anglisy sy sinoa ary ouïgour. Mpisava lalana any Saint-Pétersbourg izy izao.
FIANAKAVIANA MAHAFOY TENA
Inga sy Mikhail
Maro ny fianakaviana mifindra any an-tany hafa satria sarotra ny fiainana ao amin’ny taniny. Misy kosa mifindra satria te hanompo bebe kokoa. Manahaka an’i Abrahama sy Saraha izy ireo amin’izany. (Gen. 12:1-9) Avy any Ukraine, ohatra, i Mikhail sy Inga. Nifindra tany Rosia izy mivady tamin’ny 2003, ary tsy ela dia nahita olona liana.
Hoy i Mikhail: “Nitory tany amin’ny toerana mbola tsy nitoriana mihitsy izahay, indray mandeha. Nisy lehilahy zokiolona nanontany hoe: ‘Mpitory ianareo e?’ Dia namaly izahay hoe: ‘Ie.’ Dia hoy izy: ‘Fantatro hoe tsy maintsy hisy mpitory ho tonga atỳ, na ho ela na ho haingana. Tsy maintsy tanteraka mantsy ilay tenin’i Jesosy.’ Notononiny avy eo ny Matio 24:14.” Hoy ihany i Mikhail: “Nisy vehivavy batista folo teo ho eo koa tany. Tena te hahalala ny fahamarinana izy ireo. Nanana boky Hiaina Mandrakizay izy ireo, ary iny no nianarany isaky ny faran’ny herinandro. Nijanona ela teo amin-dry zareo izahay ary namaly ny fanontaniany. Nihira ny hiran’ilay Fanjakana izahay rehetra avy eo, dia nisakafo. Nahafinaritra be ilay izy, ka tsy hadinoko mihitsy!” Nilaza i Mikhail sy Inga fa nahasoa azy roa ny nanitatra faritany satria lasa akaiky kokoa an’i Jehovah izy ireo, lasa tia olona kokoa, ary sambatra kokoa. Manao ny asan’ny faritra izao izy mivady.
Oksana syAleksey ary Yury
Avy any Ukraine koa i Yury sy Oksana, ary 35 taona eo ho eo. I Aleksey zanany kosa 13 taona izao. Nitsidika ny Betelan’i Rosia izy ireo tamin’ny 2007, ka nahita sarintanin’i Rosia. Mbola be faritra tsy misy mpitory teo amin’ilay izy. Hoy i Oksana: “Hitanay tamin’ilay sary fa tena mbola mila mpitory be dia be atỳ Rosia. Tapa-kevitra hifindra tatỳ àry izahay.” Hoy koa i Yury: “Vao mainka nazoto izahay rehefa namaky an’ilay lahatsoratra hoe ‘Afaka Manompo any An-tany Hafa ve Ianao?’, * sy ny lahatsoratra hafa tao amin’ny bokintsika. Natoron’ny sampan’i Rosia koa ny toerana tsara hifindranay, dia nandeha kely tatỳ izahay mba hitady trano sy asa.” Nifindra tany Rosia izy mianakavy tamin’ny 2008.
Sahirana be izy ireo vao nahita asa sady imbetsaka no nifindra trano. Hoy i Yury: “Matetika izahay no nivavaka mba tsy ho kivy, dia notohizinay foana ny fanompoana sady natoky izahay hoe hanohana anay i Jehovah. Dia nokarakarainy tokoa izahay rehefa nanao loha laharana ny Fanjakany. Lasa natanjaka ara-panahy sy nifankatia be koa izahay telo mianaka.” (Mat. 6:22, 33) Nahasoa an’i Aleksey koa ve ny nanitatra faritany? Hoy i Oksana: “Nisy vokany be taminy ilay izy. Nanokan-tena ho an’i Jehovah izy, dia natao batisa tamin’izy sivy taona. Manao mpisava lalana mpanampy izy isaky ny vakansy satria hitany hoe mbola mila mpitory betsaka eto. Faly be izahay fa tena tia manompo izy.” Mpisava lalana manokana izao i Yury sy Oksana.
Mila matoky tanteraka an’i Jehovah àry ianao raha te hanitatra faritany. Manaporofo an’izany ny tenin’ireo mpitory ireo. Marina fa tsy mora ny fiainan’izy ireo any amin’ilay faritany vaovao, nefa faly be izy ireo satria mahita olona te hihaino ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana. Afaka manampy amin’ny fijinjana ara-panahy any amin’ny toerana mbola tena ilana mpitory àry ve ianao? Azo antoka fa ho faly be ianao raha manao an’izany. Vao tonga kelikely any ianao, dia hiteny hoatran’i Yury hoe: “Tahaka izay aho mba efa taloha kokoa no nankatỳ. Izay ihany no anenenako.”
^ feh. 20 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Oktobra 1999, pejy 23-27.
Hizara Hizara Nahafoy Tena Izy Ireo: Rosia
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2015
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2015